Tag: fanalahidy mikasika farany | Martech Zone
Tag: fanondroana mikasika farany
Ny iray amin'ireo sary miady hevitra resahiko amin'ny saika isaky ny resaka ataoko amin'ny orinasa dia ilay antsoiko hoe angano famaritana. Amin'ny rafitry ny fandrefesana rehetra dia aleontsika mifehy ny fitsipi-pitondrantena sy tsy fitoviana. Raha izany dia izany. Olana anefa na izany aza satria tsy izany no andraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Tsy maninona na mpanjifa ianao na raha orinasa ianao - tsy ny zava-misy amin'ny dian'ny mpanjifa fotsiny izany.